फेसबुकबाट चिनजानपछि विदेशबाट आएको, त्यो केटाले मलाई गर्भवती बनाएर भा’ग्यो ! -
Home मनोरन्जन फेसबुकबाट चिनजानपछि विदेशबाट आएको, त्यो केटाले मलाई गर्भवती बनाएर भा’ग्यो !
फेसबुकबाट चिनजानपछि विदेशबाट आएको, त्यो केटाले मलाई गर्भवती बनाएर भा’ग्यो !
फेसबुकबाट चिनजानपछि बसेको माया प्रेमले जीवनमा कहिल्यै नभुल्ने चोट देला भनेर शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ की ताराले कहिल्यै पनि सोच्नुभएको थिएन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट चिनजान र त्यसपछिको माया प्रेमले गहिरो घाउ देला भनेर कल्पनासमेत उहाँले गर्नुभएको थिएन । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका ग्वानीका रमेशले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छँदा फेसबुकमा निकै मायापिरतीका कुरा गरी, ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’*****,
भविष्यका मिठा सपना देखाई तारालाई आफ्नो बनाउने कसम खाएका थिए । मायापिरती बसेको एक वर्ष नबित्दै रमेश वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्किए । तारालाई आफ्नो बनाउन गरेको बाचा पूरा गर्न तारालाई भगाएर लगे । “गत वर्षको फागुन ११ गतेको कुरा हो”, ताराले भन्नुभयो, “घरमै आएर रमेशले घरका अभिभावकसँग माग्नका लागि आमाबुवालाई पठाउँछु भनेर एक रात हाम्रै घरमा बसे । भोलिपल्ट मलाई पठाउन नजिकको झलारी बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ भनेर कर गर्न थाले । नाइनास्ती गर्न सकिनँ । झलारी बजारसम्म गएँ ।”
“पुरुषको तुलनामा महिला अधिक हिं ‘सामा पर्ने गरेका छन् । यसको मुख्य कारकका रुपमा जाँ’डर’क्सी’को अनियन्त्रितरूपमा बिक्री वितरण नै हो”, अधिवक्ता भट्टले भन्नुभयो, “केही नपाइने ठाउँमा म’दि’रा पाइन्छ । यसको नियन्त्रण जरुरी छ ।” एकअर्काको भावना नबुझिकनै गरिने प्रेमविवाहसमेत असफल हुँदै गएको चर्चा गर्दै उहाँले यसरी गरिएका प्रेमविवाह एकअर्काप्रतिको अविश्वासका कारण बीचमै टुट्ने गरेकाले यसमा पनि महिला नै पीडित बन्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार देखासिखीमै गरिने प्रेमविवाहमा अधिकांश शिक्षित युवायुवती नै रहने गरेका छन् । “कानूनी उपचार नगरिकनै अधिकांश हिं ‘साका घटनालाई मिलापत्रमै टुङग्याइँदा यी घटनापछि विकराल रूपमा आउने गरेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा बढी यौ ‘नज’न्य हिं”सा’का घटना बढी छन् ।